Maaddaama WOWOW ay ku qanacsan tahay tayada tubbada dareeraha naaska ee loo yaqaan 'nickel pot filler tub', waxay ku siineysaa muddo 5 sano ah oo bogaadin ah. Maaddaama WOWOW ay bixiso qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta aad ka heli karto, waxay sidoo kale ku siinaysaa damaanad 90-maalmood ah oo lacag celin ah. Sidaa daraadeed qatar uma gelinaysid haba yaraatee. Haddii aadan ku qancin doonin tuubada dareeraha ah ee loo yaqaan 'nickel pot filter tub', waxaad si fudud u heli doontaa lacag celin. WOWOW waxay u taagan tahay wax soo saarkooda oo aad isla markiiba ogaan karto. Faa'iidooyinka tubbada dareeraha naaska ee loo yaqaan 'nickel oil filter' ee xajmi ahaan kooban:
• Furiinka dheriga naqshadeynta casriga ah
• Isku xirnaanta tayada iyo korontada
• Si nabadgelyo leh u isticmaalkeeda
• Dhammeystirta nikkeliska
• Way fududahay in lagu rakibo 30 daqiiqo
La iibiyey: 68
WOWOW Top Rated Down Jiijooyinka Qufulka Kusoo Kordhay ...